Vacos Baby Monitor၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် | Gadget သတင်းများ
Rafa Rodríguez Ballesteros | 01/09/2021 20:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 31/08/2021 23:50 | reviews
ငါတို့သည် Actualidad Gadget နှင့်အတူပြန်လာသည် မိသားစုအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအထူးသဖြင့်ကလေးရှိသောမိသားစုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ထဲသို့ ၀ င်လာသည်။ AND အိမ်တွင်ကလေးငယ်ရှိသောမိဘများအတွက်မည်သည့်အကူအညီမျှမရချေမရ။ ဒီနေ့ငါတို့အကြောင်းပြောကြမယ် Baby Monitor ကိုအလွတ်ထားပါအဆင့်မြင့်ကင်မရာတစ်လုံး၊ အိမ်သေးသေးလေးရဲ့အသေးစိတ်မပျောက်ပျက်သွားအောင်.
ကလေးမော်နီတာကင်မရာတစ်လုံးကိုရှာတဲ့အခါစျေးကွက်ထဲမှာအဆုံးမရှိဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ Vacos ရဲ့အဆိုပြုချက်အကြောင်းငါတို့အားလုံးကိုပြောပြမယ်မရ။ စုံလင်သောလုံခြုံရေးကင်မရာတစ်လုံးအတွက် ကလေးငယ်များကိုဗီဒီယို၊ အသံ၊ ညမြင်ကွင်းနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ အခြားသူများအားပူဇော်နိုင်စွမ်းထက်
1 Vacos Baby Monitor၊ သင့်ကလေးအန္တရာယ်ကင်းသည်
2 ထုပ်ပိုးထားသော Vacos Baby Monitor
4 Vacos Baby Monitor ၏အင်္ဂါရပ်များ
4.1 အရာအားလုံးထိန်းချုပ်ထားတယ် "
5 Vacos Baby Monitor ၏အားသာချက်အားနည်းချက်များ
Vacos Baby Monitor၊ သင့်ကလေးအန္တရာယ်ကင်းသည်
ကိုကြည့်နေသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်Vacos Baby Monitor ကင်မရာသည် အခြားလုံခြုံရေးကင်မရာများနှင့်ဆင်တူသည် ငါတို့သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောစောင့်ကြည့်မှုအမျိုးအစားအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကင်မရာများ ငါတို့ကြည့်ရင်သိပေမယ့် ၎င်း၌ရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးသောခြားနားချက်များကိုတွေ့ရှိသည်မရ။ ဒါကမင်းရှာနေတဲ့ Baby Monitor လား။ အဲဒါကိုကိုင်ပါ Baby Monitor ကိုအလွတ်ထားပါ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
အဲဒါကိုအဓိကအားဖြင့်ငါတို့တွေ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် ပိတ်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခု ငါတို့မှာဗွီဒီယိုထုတ်လွှင့်သူ၊ ကင်မရာနဲ့သူတို့လိုနေရာမျိုးမှာမျက်နှာပြင်လိုမျိုးအချက်ပြလက်ခံစက်တစ်ခုရှိတယ် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုများ. ၁၀၀% လုံခြုံသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော hack များမှကင်းဝေးသည်။
ထုပ်ပိုးထားသော Vacos Baby Monitor
ယခုအချိန်သည်ဤကလေးစောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာအစုံ၏သေတ္တာအတွင်းမှကြည့်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့မြင်ဖူးပြီးသားအတိုင်းဖြစ်တဲ့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုငါတို့တွေ့တယ် ဗီဒီယိုကင်မရာကိုယ်တိုင်အဖြူရောင်နှင့်တောက်ပပြီးပြီးသောပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပြီးနောက် မျက်နှာပြင်နှင့်အတူစောင့်ကြည့် နှင့်ထိန်းချုပ်ခလုတ်များ
ကျွန်ုပ်တို့တွင်သုံးရန်အခြားအခြေခံအချက်များလည်းရှိသည် ကေဘယ်လ်ကြိုးမရ။ ငါတို့မှာကေဘယ်ရှိတယ် ကင်မရာအတွက်လက်ရှိနှင့်နောက်ထပ်တစ်ခု ဘက်ထရီအားသွင်းရန် စောင့်ကြည့်။ နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ USB Type-C အမျိုးအစား။ ဒါ့အပြင် power adapter နှစ်ခု ကေဘယ်လ်တစ်ခုစီအတွက်
ဒီမှာမင်းရဲ့အမိန့် Baby Monitor ကိုအလွတ်ထားပါ တရားဝင် ၀ က်ဆိုက်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်
နောက်ဆုံးမှာငါတို့တွေ့တယ် ဗွီဒီယိုကင်မရာကိုနံရံသို့ကပ်ရန်သုံးမည့်အပိုပစ္စည်း ငါတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နေရာကို ဦး တည်တယ်။ လေးတွေပါ ကင်မရာသည်ကလေးကဲ့သို့ကြည့်ကောင်းစေရန်အလှဆင်ထားသောအသေးစိတ်များ အဲဒါကိုငါတို့ကအဲဒါကိုတင်နိုင်တယ်။ နှစ်စုံ ပန်းရောင်နှင့်အဝါရောင်ချိုမရ။ အစဉ်အတိုင်း၊aသေးငယ်တဲ့အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်နှင့်အာမခံစာရွက်စာတမ်း ထုတ်ကုန်၏။
ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးသည့်အတိုင်းကင်မရာကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်နိုင်သည့်စောင့်ကြည့်ကင်မရာများထဲမှတစ်ခုကိုပြီးပြည့်စုံစွာကုသနိုင်သည်။ သူ့မှာတစ်ခုရှိတယ် cylindrical base သည်အခြားလုံးဝန်းသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျန်သည် မှန်ဘီလူးကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေ့တုန်းဘဲ အင်တင်နာကဲ့သို့၎င်းကိုကွဲပြားစေသောဒြပ်စင်များအကွက်ထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသောအလှဆင်အသုံးအဆောင်အချို့နှင့်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အင်္ဂါရပ်တွေ microphone နဲ့ speaker နဲ့လည်း ဒါကြောင့်တပ်ဆင်ထားသည် နှစ်လမ်းသွားအသံမရ။ သူနိုးလာရင် (သို့) သူနိုးလာရင်အချိန်တိုင်းကလေးနဲ့စကားပြောဖို့အရမ်းအသုံးဝင်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ မှန်ဘီလူးတွင် HD 720P resolution ရှိသည် နှင့် အလွန်ကောင်းသောညမြင်ကွင်း မည်သည့်အလင်းရောင်တွင်မဆို (သို့) လုံးဝမရှိခြင်း
El စောငျ့ရှောကျ ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်သောa၅.၉၉ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်မရ။ အိမ်ရှေ့၊ ညာဘက် ဖန်သားပြင်မှကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များ ၎င်းတို့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
ထဲမှာ နောက်ဘက်အပေါင်းaမျက်တောင် ဘာအလုပ်လုပ်လဲ ဒါကြောင့်ငါတို့သူမကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ငါတို့ရှာ အင်တင်နာ သို့မှသာ signal ကိုထုတ်လွှတ်။ ပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာလက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အောကျွေခမှာ တစ်ခုရှိ memory card slot ပါပါတယ် မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းနိုင်သော memory 256 MB အထိရှိသည်။
Vacos Baby Monitor ၏အင်္ဂါရပ်များ
ဤ Vacos Baby Monitor သည်၎င်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းများကိုပြောပြရန်အချိန်တန်ပြီ။ ငါတို့ကမင်းကိုပြောပြီးသားအတိုင်းပဲ ပုံစံ“ ပုံမှန်” စောင့်ကြည့်ကင်မရာတစ်လုံးနှင့်ဆင်တူသော်လည်း၎င်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်၊ ခေတ်မီသည် ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာ၌မှရန်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
မော်နီတာ menu မှ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရန်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်။ နှင့် တိုက်ရိုက်ခလုတ်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ ကင်မရာ (သို့) မိုက်ခရိုဖုန်းကိုဖွင့်သို့မဟုတ်ပိတ်ပါ ကလေးအားစကားပြောရန် (သို့) ကလေးငိုလျှင်ကြားနိုင်စေရန်။ ခလုတ်များနှင့်အတူဗဟိုဧရိယာ ငါတို့ကကင်မရာကို ၃၅၅ ဒီဂရီအထိလှည့်နိုင်ပြီးအဲဒါကို ၅၅ ဒီဂရီစောင်းတဲ့အထိရွှေ့နိုင်ပါတယ်မရ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလယ်ခလုတ်ဖြင့်ပုံကိုချဲ့နိုင်သည် 1,5X ကို 2X အထိချဲ့ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Vacos Baby Monitor သည်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောအဆုံးကိုရှာရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ မော်နီတာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသောကင်မရာ ၄ လုံးအထိချိတ်ဆက်နိုင်သည် ငါတို့ကဒီနည်းအတိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်လိုသောအခန်း၏အိပ်ခန်းထောင့်တစ်ခုစီ၏ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့ရလိမ့်မည်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်သင်ရှာနေသောလုံခြုံရေးအားလုံး၊ ၎င်း သင်ယခုဝယ်နိုင်သည် ၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ။
အာရုံခံကိရိယာ ကင်မရာပါ ၀ င်သည် ၎င်းကိုပိုမိုပြည့်စုံ။ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်စေသည် ၁၀၀% ပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ငါတို့မှာတစ်ခုရှိတယ် ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာ မော်နီတာကနိုးလာပြီးကလေးနိုးလာလားဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေချိန်လားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ထိုနည်းတူ၊ အသံအာရုံခံကိရိယာ ကလေးငိုလျှင်ကင်မရာနှင့်စောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
အဆိုပါတစ်ခုမှာ Vacos Baby Monitor သည်အခြားနည်းလမ်းများနှင့်ကွဲပြားစေသောအာရုံခံကိရိယာများမှာအပူချိန်ဖြစ်သည်မရ။ ကင်မရာသည်အခန်း၏အပူချိန်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သည်။ အပူချိန်မြင့်ရန်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်အပူချိန်မြင့်သည်ဖြစ်စေဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သိလိမ့်မည်။
Vacos Baby Monitor တွင်ပါ ၀ င်သည် ပုံများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေမရ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းရုံသာမက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်မှုငါတို့လိုချင်ရင်aကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ် Micro SD ကဒ်ကို 256MB အထိသိမ်းဆည်းရန် video ပေါ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြတ်သားပြီးပြတ်တောက်သောအချက်ပြတစ်ခုရှိလိမ့်မည် အကွာအဝေးမီတာ ၃၀၀ အထိ ကင်မရာမှမော်နီတာသို့ငါတို့သည်ပြသနာမရှိဘဲအိမ်တစ် ၀ န်းလှည့်ပတ်သွားလာနိုင်သည်။
အရေးကြီးသောအသေးစိတ်တစ်ခုမှာ Vacos Baby Monitor ဖြစ်သည် မင်းစမတ်ဖုန်းမလိုဘူးထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပလီကေးရှင်းများထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလည်းမလိုအပ်ပါ အသုံးပြုရန်အတွက်ကင်မရာမှထုတ်လွှတ်သောအချက်ပြကိုမော်နီတာကိုယ်တိုင်သာတွေ့ရှိသည်။ အက်ပ်များသို့မဟုတ်အင်တာနက်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများသည်ဟက်ကာများမှကင်းလွတ်သည်.
Vacos Baby Monitor ၏အားသာချက်အားနည်းချက်များ
El မျက်နှာပြင် ၅ လက်မ 720p resolution နဲ့
ရိုးရှင်း de အသုံး ပထမအခိုက်အတန့်နှင့်ရွေးချယ်စရာမျိုးစုံ
တစ်ခါတစ်လေအင်တာနက်မရှိရင် အိမ်၏ဗိသုကာ ထားနိုင်ပါတယ် အတားအဆီးအချို့
Baby Monitor ကိုအလွတ်ထားပါ
အပေါ်တင်ခဲ့သည်: 1 2021 စက်တင်ဘာလ
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်: 31 သြဂုတ်လ 2021
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Vacos Baby Monitor, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်